Patrick Byrne - Bhuku Nyoro Grey Pane Zvepabonde Uye Transgender | KUSVIRA
Patrick Byrne - Bhuku Nyoro Grey Pane Zvepabonde Uye Transgender
Kana munhu anogona kuchinja bonde ravo, vanogona here kuchinja zera ravo kana dzinza ravo?
The Little Grey Book on Bonde uye Transgender mibvunzo mibvunzo iyo ideology (yehunyanzvi "kutenda" nehurongwa hwezvematongerwo enyika) hwe transgenderism. Maonero epasi rose anotenderera anoti mitemo inofanira kucherechedzera munhu "mukadzi" kunze kwekuti, panzvimbo yebonde, yekubereka.
Transgenderism ine yakawanda conundrums.
Isu tese tiri pane yakafanana pakati pe100 pazana rechirume ne100 pazana rechikadzi, kana isu tese takangova vanhurume kana munhukadzi?
Vasikana vanozvara vanofanirwa here kumanikidzwa kugamuchira vakomana vekubereka avo vanozivisa sevakadzi munzvimbo dzavo dzakachengeteka kuzvikoro? Vanhurume vaviri vekuzvarwa avo vanocherekedza sevakadzi vanofanirwa kuve vanozivikanwa sevanodzvinyirira here?
Vamiririri vanoda kuti vanhu vasaite mutauro, mitambo, dzimba dzekudyira, dzimba dzekushandurwa, nezvimwe .. Izvi zvinobata varume nevakadzi zvakafanana, yunifomu… mumvuri mumwe wegrey. Izvi hazvisi zvakasiyana ne "kusiyana" here?
Sei mutemo "wechikadzi" uchifanira kumanikidza munhu wese - panjodzi yemutemo, nyanzvi, basa uye masiyano ezvetsika - kupa varume vekuzvarwa vanoziva sevakadzi kodzero dzakaenzana sevakadzi vanozvarwa?
Mitemo yeTransgender inoita kuti chitendero chizive "chinamato chakasimbiswa", sechinamato chakamiswa nenyika, chichigadzira kusawirirana kukuru neruzhinji rwevanhu vanoomerera kuzvinhu zvakasikwa zvepasi rose kuti bonde ravo rakagadziriswa.
VaPatrick Byrne vanobvunza mibvunzo yekutsvaga pamusoro pemagariro emitemo yekuzivikanwa kwevakadzi pane vanhuwo zvavo uye democracy.
Inowanikwa kubva kuAmazon pano.